Sida loo noqdo tijaabiye toy: 10 Siyaabood oo Lagu Sameeyo $ 100 Dheeraad ah
Bogga ugu weyn Sida Loo Noqdo Tijaabiyaha Alaabta: 10 Siyaabood Oo Lagu Sameeyo $ 100 Dheeraad ah | TILMAAN HUBAN
Sida Loo Noqdo Tijaabiyaha Alaabta: 10 Siyaabood Oo Lagu Sameeyo $ 100 Dheeraad ah | TILMAAN HUBAN
Lacag sameynta waa wax qof walba doonayo inuu sameeyo, heck waa sababta aan xitaa uga tagno sariiraheena raaxada leh subaxdii.
Lacagtu ma takoorto, mana daryeesho da'da qofka, isirka, ama asalka. Si kastaba ha ahaatee, fursadaha lacag-heliddu mararka qaarkood way adag tahay in la helo, gaar ahaan carruurta iyo dadka waaweyn qaarkood oo aan rabin inay kulaylka ka shaqeeyaan goob xafiis rasmi ah.
Weligaa ma qiyaastay waxa ay dareemi doonto lacag dheeraad ah samee adigoo ku ciyaaraya alaabta carruurtu ku ciyaarto laakiin aadan garanayn sida loo sameeyo? Markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo noqdo tijaabiye toy.
Maxay Khubaradu Leeyihiin.
Waa kuma tijaabiye toy?
Yaa noqon kara tijaabiye toy?
Sida loo sameeyo $ 100 dheeraad ah baaritaanka toy…
#-1. Abuur Joogitaan Online ah oo Adag:
#-2. Isku qor websaytyada ama kooxaha shaqaalaynta imtixaanka toy
#-3. U Diyaari Carruurtaada Fursadaha Tijaabada Alaabta.
#-5. Isticmaal Oo Dib U Eeg Ciyaaraha
#-6. Tag Milesyada Dheeraadka ah
#-7. La xiriir dukaammada jirka ee riwaayadaha tijaabada toy
#-8. Baraha Bulshada ee Prowl
#-9. Ku biir Goobaha dib u eegista
#-10. Ku biir canabka amazon
Sida laga soo xigtay falsafaddii Faransiiska qarnigii 18-aad Jean Jacques Rousseau, carruurtu si fiican bay wax u bartaan marka la ciyaarayo marka loo eego tilmaamaha. Tani waa sababta ay muhiim ugu tahay carruurtu inay helaan ikhtiyaarro badan markay ciyaarayaan, laakiin waxay xitaa ka sii xiiso badan tahay markay ciyaari karaan oo shaqaysan karaan.
Sida Evans oo ah dareen Youtube oo sameeyay malaayiin doollar oo tijaabinaya alaabta carruurtu ku ciyaarto iyo dhejinta faallooyinka.
Maqaalkan, waxaan kugu soo qaadan doonaa waxa ay qaadanayso si aad u noqoto tijaabiye toy oo aad ku samayso $ 100 dheeraad ah taas, xulashooyinka kala duwan ee aad heli karto, iyo dabcan sidaad u noqon lahayd tijaabiye toy ee soo -saareyaasha.
Laakin intaan ka hor aan marka hore fahano waxa ay ka dhigan tahay in la noqdo tijaabiye toy ka dibna waxaan si sax ah u guda gali doonaa talaabooyinka la raacayo.
Dadka maqaalkan akhriya waxaa lagula talinayaa inay sidoo kale akhriyaan; Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bixiyo Si Loogu Qoro Faallooyinka Amazon 2022
Tijaabiyeyaasha alaabta carruurtu ku ciyaarto ayaa ah kuwa lacag la siinayo si ay u isticmaalaan toy cusub ama mid duug ah waxayna bixiyaan dib -u -eegis ku saabsan alaabta carruurtu ku ciyaarto si ay uga caawiso soo -saareyaasha inay shaqadooda ku fiicnaadaan. Waxaa la siin karaa badeecadaha si ay ugu adeegsadaan guryahooda muddo ama lagu casuumo xarunta shirkadda si loogu tijaabiyo toy.
XIDHIIDHKA: 25 Goobood oo ugu Fiican oo Ku Shaqaaleysiiya Markaad 15 Sano Jirto ama Ka Yar | 2022 Liiska
Nuxurka oo dhan ee ah in dadku ay tijaabiyaan alaabada ay ku ciyaaraan ka hor inta aan loo dhigin dadweynaha loo heli karo waa in la hubiyo in baahida degdega ah ee isticmaalayaasha la buuxiyo. Iyo sidoo kale in la sameeyo sixid halka lagama maarmaanka ah, iyo hagaajinta lagu sameeyo alaabta lagu ciyaaro ee da'da weyn.
Ha ku guuldareysan inaad sidoo kale akhrido; 11 Madal Oo Lacag Laguugu Siin Karo Si Loogu Tijaabiyo Alaabta Guriga 2022
Si ka soo horjeeda fikradaha qaarkood, fursadaha tijaabinta toygu kuma koobna carruurta oo keliya. Haa, xitaa dadka waaweyn wuxuu noqon karaa tijaabiye toy xirfadeysan, maaddaama aan haysanno alaabta carruurtu ku ciyaarto, inta badan cayaaraha ku habboon dadka waaweyn oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in shaqadoodu ay tahay mid aad uga baahi badan tan tijaabiyaha alaabta carruurtu ku ciyaarto.
Isagoo si cad u sheegay waxa ay ka dhigan tahay tijaabiye toy iyo yaa noqon kara mid; akhri intaan ku siinayo tuse tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo noqdo tijaabiye toy oo aad u bilowdo inaad kasbato $ 100 dheeraad ah ama ka badan.
Shaqooyinka tijaabinta alaabta lagu ciyaaro inta badan laguma xayeysiiyo warbaahinta caadiga ah sida shaqooyinka kale, tani waa sababta oo ah qayb weyn oo ka mid ah fursadaha shaqo ee tijaabinta ciyaaraha ayaa inta badan lagu dhejiyaa shabakadaha warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, iwm.
Shirkadaha doonaya inay shaqaaleeyaan tijaabiyaasha toy waxay adeegsadaan khiyaamadan si looga fogaado inay ku buuxsamaan dib u soo noqoshada laga yaabo inay soo gasho haddii xayeysiisyadooda inta badan lagu dhejiyo warbaahinta guud.
Markaa haddii aad tahay waalid oo aad runtii rabto in ilmahaagu helo tallaalkiisa xaqa ah si uu u noqdo tijaabiye toy, ama aad tahay qof qaangaar ah oo doonaya inuu ka faa'ideysto fursadaha uu ku joogo dhulka tijaabinta toy, laakiin ma ogid sida ay tahay inaad sii kordhi raadadkaaga dhijitaalka ah ee warbaahinta bulshada.
Maadaama ay tani si weyn u kordhineyso fursadahaaga inaad noqoto tijaabiye toy.
Waxaa jira shirkado tijaabiya toy -yada bulshooyinka oo si gaar ah had iyo jeer u imaan doona markay u baahan yihiin caawinta qorista tijaabiyeyaasha toy. Noqoshada xubin aad u firfircoon oo ka mid ah goobahaas ama kooxahaas shaki la'aan waxay kordhin doontaa fursadahaaga inaad noqoto tijaabiye toy.
Qaar ka mid ah goobahan ayaa marka hore emayl u soo diri doona xubnahooda marka ay jirto fursad tijaabiyeyaasha toy. Tani waxay xubnahooda siinaysaa faa iido ka badan kuwa laga yaabo inaysan ahayn xubnahooda, sidaa darteed baahida loo qabo inaad xubin ka noqoto. Qaar ka mid ah websaydhada waxaa ka mid ah…
Xarunta fikirka Mattel bogagga warbaahinta bulshada
Tallaabada 2 bogagga warbaahinta bulshada
Mega waxay xannibaa bogagga warbaahinta bulshada
Discovery toys bogagga warbaahinta bulshada
Qorayaasha ayaa imaan kara iyagoo wacaya waqti kasta. Kuma filna in la codsado riwaayadaha tijaabinta toy -ga. Waa inaad hubisaa in carruurtaadu diyaar u yihiin oo diyaar u yihiin inay bilaabaan riwaayadda haddii la qoro.
#-4. Samee Fiidiyowyo Ku Saabsan Alaabta oo La Wadaag Khibradaada
Samaynta fiidiyowyada carruurtaada iyagoo adeegsanaya alaabta carruurtu ku ciyaarto waxay tallaabo dheeraad ah kuu qaadi kartaa albaabbada shirkadaha alaabta carruurtu ku ciyaarto. Fiidiyowyadan ayaa ka dhigi doona inay arkaan sida xamaasadda iyo xamaasadda leh ee carruurtaadu u yihiin. Markaad sidaas samaynayso, ku soo dejiso riwaayado ay ku ciyaaraan toy.
Waalid ahaan, waxaa hubaal ah inaad heli doontid alaabta carruurtu ku ciyaarto, haddii ay helaan heesaha tijaabada toy iyo haddii kaleba. Waxaad weydiin kartaa carruurtaada inay kuu sheegaan inta ay ka heleen isticmaalka alaabadooda marka ay u qorayaan jawaabahooda dib u eegista. Haddii tan si joogto ah loo sameeyo, xoogaa fiiro gaar ah ayaa la siin doonaa adiga iyo carruurtaada. Dhawaanna dalabyada tijaabada toy ku filan ayaa iman doona.
Waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad noqoto mid firfircoon, adoo email u diraya shirkadaha raadinaya tijaabiyeyaasha ciyaaraha. Tani waxay ku siinaysaa bilawga kuwa kale kuwaas oo laga yaabo inay raadiyaan doorar la mid ah. Aad bay uga fiican tahay inaad masiirkaaga gacanta u geliso masiirka iyo mareegaha internetka.
Adigoo rajaynaya inaad ka heli doonto natiijooyin waafi ah dadaallada onlaynka ah, ha ka saarin saamaynta dukaamada alaabta carruurtu ku ciyaarto. Sida iska cad waxay ku jiraan ganacsiga iibsashada iyo iibinta alaabta carruurtu ku ciyaarto, waxaa laga yaabaa inay ku siiyaan nasashada aad u baahan tahay si aad u gaarto riyadaada.
Kaliya u soco dukaanka oo la sheekeyso maareeyaha dukaanka. Waxaa laga yaabaa inay tahay waxaad u baahan tahay hadda. Inta ay ku jiraan, carruurtaadu waqti yar bay ku qaadan karaan inay ku ciyaaraan alaabta carruurtu ku ciyaarto.
Inaad xubin firfircoon ka noqoto bulshada khadka tooska ah runtii waa muhiim, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn. Nolosha warbaahinta bulshada ee dhabta ah ayaa ku caawin doonta. Ku gurguurashada qoraallada warbaahinta bulshada waxay ku siinaysaa bilow hore. Markaad halkaa ku jirto, raadinta degdega ah ee warbaahinta bulshada waxay ku siin doontaa fursado fiican oo aad ku gaadho hadafkaaga.
XIDHIIDHKA: 10 Sababood Oo Aad Ku Barato Ganacsi Oo Aad Ka Baxdo Shahaadooyinkaaga 2022
Waxaa jira goobo si gaar ah loogu dhisay dib u eegista. Soo -saareyaashu waxay ku siiyaan badeecadooda lacag la'aan, taas beddelkeedana waxay ka helaan macaamiisha. Badeecaduhu waxay noqon karaan wax kasta, alaabta carruurtu ku jirto. Goobahan ayaa sidoo kale bixiya caawimaad kaa caawineysa inaad fahanto sida loo noqdo tijaabiye toy.
Amazon shaki kuma jiro mid ka mid ah dukaamada internetka ee ugu weyn adduunka, waxay leedahay meel aad u ballaaran iyo malaayiin macaamiil ah oo raadinaya ma aha oo kaliya inay iibsadaan alaab laakiin sidoo kale waxay helaan fikrado ku saabsan waxa laga yaabo inay raadinayaan inay iibsadaan.
Saameyntan, waxay leedahay goob dib -u -eegis la yiraahdo canabka amazon. Nasiib darrose, waa goob xiran oo xubnaha la casuumay oo kaliya. Laakiin ha ka welwelin, waxaad ku kasban kartaa casuumaad…
Si aad casuumaad u hesho, waa inaad samaysay fiidyowyo badan oo dib -u -eegis ah, labadaba togan iyo kuwo taban oo caawimaad u ah macaamiisha. Markaa haddii aadan qaadan taladeena bilowga ah ee ku saabsan bilaabista sameynta fiidyowyada dib -u -eegista, tani waa waqtigii ku habboonaa in la bilaabo.
Xaaladda ugu xun ee laga yaabo inaadan ku casuumin, si kastaba ha ahaatee, waxaad sumcad ku dhex dhisi lahayd bulshada dib-u-eegista, taasoo weli kuu keeni doonta fursadaha dib-u-eegista toy.
45 Dariiqyada Ugu Dhaqsaha Badan Si Loogu Sameeyo Lacag Kaash ah oo Khadka tooska ah: Hubi tan oo hubi inaad haysatid dhammaan aqoonta aad u baahan tahay
Shirkaduhu waxay had iyo jeer isha ku hayaan carruurta inay dib u eegaan badeecadooda ka hor inta aysan suuqa gelin, iyagoo garanaya halka laga raadinaayo fursadaha, iyo sida loo dalbado gigsyada noocan oo kale ah waxay kaa qaadaysaa tallaabo dheeraad ah si aad u gaarto hadaf kasta oo aad naftaada u qorsheysay carruurtaada qurxoon.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in shaqadu aanay u fududayn sida ay u muuqato. Haddii ay fududaan lahayd, halkaan ma joogteen, ma joognaa? Adiga iyo carruurtaadu waa inaad u diyaar garowdaan inaad dibnaha qaadataan marka wakhtigu yimaado, markaa waxaad u baahan tihiin inaad diyaar ahaataan, mar walba. Yaa og warqadda xigta ee aad heshid laga yaabaa inay tahay dalabka aad raadinayso.
11 Madal Oo Lacag Laguugu Siin Karo Si Loogu Tijaabiyo Alaabta Guriga 2022
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bixiyo Si Loogu Qoro Faallooyinka Amazon 2022
21 Fikradaha Ganacsi ee Faa'iidada u leh Dhallinyarada 2022 -ka
Immisa Ayuu Ku Kacaa Imtixaanka Qalinka?
Dib -u -eegista Xeerka Quantum 2022: Ma u qalantaa mise khiyaano cusub oo Ganacsi Labaad?
Dib -u -eegista Rosewholesale 2022: Ma Sharcibaa Mise Fadeexadda Dharka Jaban
10 Sababood Oo Aad Ku Barato Ganacsi Oo Aad Ka Baxdo Shahaadooyinkaaga 2022
Tiro wanaagsan oo dad ah ayaa dareema in dhigata kulliyadda shahaado kasta oo ay doortaan ay ka dhigayso…